Farmaajo oo Doxa kula Kulmay Boqorka Qadar – Radio Daljir
May 25, 2017 5:04 b 0
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed (Farmaajo) iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa xalay si wanaagsan loogu soo dhaweeyay Magaalada Doha ee dalka Qadar, Kadib Casuumad rasmi ah oo uu ka helay Boqorka dalka Qadar Sheekh Tamiim Bin Hamad Al Thani.
Madaxweynaha waxaa Safarkiisa ku wehliya Wasiirrada Arrimaha Dibadda, Qorsheynta, Amniga Gudaha iyo Gaashaandhigga. Waxay iyagana maanta la kulmi doonaan Wasirrada dhiggooda ah.
Madaxweynaha ayaa xalay kulan gaar ah la qaatay Boqorka dalka Qadar Sheekh Tamiim Bin Hamad Al Thani, waxayna ka wada hadleen arrimaha Amniga, Abaaraha, sidii Dowladda Soomaaliya ay taageero uga heli laheyd dalalka ay saaxiibada yihiin iyo waxybaabo kale.
Sidoo kalena, maanta waxaa jiri dooona Kulan Madaxweynaha Soomaaliya uu la qaadan doono Madaxda ugu sareysa dalka Qadar, wuxuuna kala hadli doona arrimo badan oo Soomaaliya la xiriira.
Puntland oo Beenisay Hadal ka soo Yeeray DFS (War Saxaafadeed+cod)